Nhungamiro Yako Pakusarudza MS Wiricheya
If kufamba yave nyaya kwauri, kune hombe dzakasiyana siyana zvekurapa izvo zvinogona kukubatsira iwe muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Iwe unofanirwa kutsvagurudza usati wafamba nenzira yekutenga chigaro.
Chimwe chezvipingamupinyi zvikuru kune vanhu vanoonekwa kuti vane multiple sclerosis ipfungwa yekurasikirwa nerusununguko. Vazhinji vanogona kushandisa sachigaro vashandisi vane kunetsekana zvine chekuita nerusununguko rwavo vachiri pa wiricheya.
Sezvo MS chiri chirwere chinodzikira, zvinogona kuwedzera kuomarara kuenda pachigaro. Izvi hazviwanzo kuitika kumunhu wese; vamwe vacharamba vachikwanisa kufamba, izvo zvaizovatendera vamwe kushoma kufamba.
Zvishandiso zve kufamba rusununguko
Na wiricheya urikuwedzera yako kufamba kuitira kuti ugone kutenderera zvirinyore pasina kukumbira rubatsiro. Kana ukajaira kukwira a wiricheya, iwe uchauya kuzoona kuti chishandiso chinobvumidza vanhu kuti varambe vachirarama vakazvimirira, vasingatongovimba zvakanyanya nevamwe vanhu. Dzimwe nzira dzinowanikwa zvakare kana iwe uchinzwa kuti haudi iyo wiricheya.
Iwe unogona zvakare kutarisa mune zvekufamba zvinobatsira, senge tsvimbo kana kutenderera Walker. Sarudzo inoenderana nezviri zviratidzo zvezuva nezuva, kana uchinge waneta, kuenzanisa matambudziko, kana kushaya simba kwemhasuru, ungangoda a wiricheya yemawoko kutenderera nguva dzose.
Wasvika pakuziva kuti kune akawanda marudzi akasiyana e kufamba zvinobatsira zvaunazvo, asi ichiri nzira yakaoma ku SARUDZA mhando chaiyo yechigaro yezvaunoda. Iyi inotevera ruzivo ichaita kuti zvive zvishoma zvishoma nyore kusarudza cheya cheya chaiyo yekutarisana neakawanda sclerosis.
mhando kufamba Zvibatsiro zveMS
Kuwanda kwezviratidzo zveMS zvako kunoona kana uchinyatsoda a wiricheya pane yakazara-nguva hwaro. Kana iwe uchigara wakaneta uchifamba, iwe unonzwa kuti unodzikira bhalansi yako kazhinji, kana iwe urikunzwa kushaya simba mumativi ako iwe ungangodaro ungangoda chigaro chebhuku nguva dzose.
Chinhu chinotevera chakanakisa kune wiricheya, chigadzirwa ichi chinoshandiswa zvishoma. Uchadaro kushandisa mhando yechigadzirwa ichi kuti ikubatsire iwe paunenge uchifamba-famba, zvinobatsira nzvimbo yako yegiravhiti ichikubvumidza kuti ufambe nguva dzose usingadonhe nekuzviratidza kuipa. Vamwe vanofamba ichauya yakaenzana nemavhiri mana, izvi zvinobvumidza mushandisi kuendesa iyo Walker nyore kwazvo kupfuura zvaingave nemuenzaniso, mabhora etenisi pamakumbo epamberi.
Kana iwe ukatanga kucherechedza zvidiki kana zvinyoro zviyero nyaya, kana kana iwe uchinzwa kuti rimwe remakumbo ako riri muchimiro chiri nani pane rimwe, iwe unofanirwa kuedza kutarisa mudonzvo kufamba. Danda haripe rutsigiro rwakafanana nezvigadzirwa zviviri zvakanyorwa pamusoro, asi zvinowanzoenderana uye zvinotakurika, zvichiita kuti zvive nyore kufamba nazvo kupfuura chero chimwe kufamba chigadzirwa chiripo.
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku 1-800-80-KARMA, kana ndapota takura nesu patinopindura kubvunza kwako.
Zita Rokutanga (rinodiwa)
Zita rekupedzisira (rinofanira)
Your Email (kunodiwa)
Nhamba dzerunhare (dzinodiwa)
Mibvunzo kana Makomendi (inodiwa)
Ndokumbirawo upinze iwo Mavara kubva kuMufananidzo Pazasi (unodiwa)
Kuti ushandise CAPTCHA, unoda Yakadzikana chaizvo CAPTCHA plugin yakaiswa.